သွားဘက်ဆိုင်ရာ Ultrasonic Scaler စက်ရုံ | တရုတ်သွားဘက်ဆိုင်ရာ Ultrasonic Scaler ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
သွားဖုံးကိုဖြုတ်တပ်နိုင်သော handpiece နှင့်အတူသွားဘက်ဆိုင်ရာ ultrasonic scaler ပါ ၀ င်သောသွားဘက်ဆိုင်ရာ Maxpiezo3ultrasonic scaler
၁. ဖြုတ်နိုင်သောလက်ရာကို ၁၃၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့် ၀.၂၂ MPa အောက်တွင်ထားနိုင်သည်
သွားဘက်ဆိုင်ရာ ultrasonic scaler N3000 နှင့် N3000L ကိုလက်နှင့် cavitron ultrasonic scaler တို့ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော LED
2. Autoclaved ၏မြင့်မားသောအပူချိန် 134 ° C နှင့်ဖိအား 0.22 MPa
၄။ Woodpecker နှင့် EMS scaler တို့နှင့်လိုက်ဖက်သည်
သွားဘက်ဆိုင်ရာ ultrasonic scaler EMS လိုက်ဖက်သော handpiece နှင့် LED ulrasonic scaler အရည်အသွေးကောင်း
EMS နှင့် Woodpecker တို့နှင့်လိုက်ဖက်သောသွားဘက်ဆိုင်ရာ ultrasonic scaler ကို handpiece နှင့် foot switch
သွားဘက်ဆိုင်ရာ ultrasonic scaler သွားဘက်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးမြင့်ကိရိယာများ dental ultrasonic scaler စျေးသက်သက်သာသာ
ခရီးဆောင်သွားပွတ်တံ scaler သွားလျှပ်စစ်လျှပ်စစ်သွားဘက်ဆိုင်ရာ ultrasonic scaler သွားသန့်ရှင်းရေးစက်
အကျဉ်းချုပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမူရင်း၊ တရုတ်၊ တရုတ်မော်ဒယ်နံပါတ်: သွားဘက်ဆိုင်ရာ ultrasonic scaler ပါဝါအရင်းအမြစ်: လျှပ်စစ်အာမခံ ၁ နှစ်ရောင်းချမှု ၀ န်ဆောင်မှု: အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်း: သံ၊ ပလပ်စတစ်၊ သံမဏိ၊ ပလပ်စတစ်သက်တမ်း
ဖြုတ်တပ်နိုင်သော handpiece နှင့် foot switch တို့ပါရှိသောသွားဘက်ဆိုင်ရာ ultrasonic scaler အကြံပေးချက်များ
မူရင်းအသေးစိတ်နေရာအကျဉ်း၊ အကျဉ်းချုပ်၊ တရုတ်၊ တရုတ်မော်ဒယ်နံပါတ်: သွားဘက်ဆိုင်ရာ ultrasonic scaler Maxpiezo 3+ ပါဝါအရင်းအမြစ်၊ လျှပ်စစ်အာမခံ ၁ နှစ်ရောင်း ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုအွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်း
ဖြုတ်တပ်နိုင်သော handpiece ultrasonic ရောင်ခြည်သုံး scaler Maxpiezo 3+
သွားဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်း ultrasonic scaler piezo 3+ ဖြုတ်တပ်နိုင်သောလက်ကိုင်သွားဘက်ဆိုင်ရာသယ်ဆောင်နိုင်သော handpiece ultrasonic scaler
dental ultrasonic scaler သွားဘက်ဆိုင်ရာသုံးပစ္စည်းများ Maxpiezo 3+ dental ultrasonic scaler စျေးသက်သက်သာသာ
လက်သန့်ရှင်းရေးသုံးစက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Ultrasonic scaler LED သွားတိုက်သန့်ရှင်းရေးသုံးလက်သန့်စက်ရုံသုံးစျေးနှုန်း
မူရင်းအသေးစိတ်နေရာအကျဉ်း၊ အကျဉ်းချုပ်၊ တရုတ်၊ တရုတ်မော်ဒယ်နံပါတ်: N2000/N2000L, N3000/N3000L ပါဝါအရင်းအမြစ်၊ လျှပ်စစ်အာမခံ ၁ နှစ်ရောင်း ၀ န်ဆောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုအွန်လိုင်းမှနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းများ၊ သံ၊ ပလပ်စတစ်၊ သံမဏိ၊ သံ၊ မရ။
လက်နှင့်လိုက်ဖက်သော EMS နှင့် Woodpecker တို့နှင့်အတူလက်ကားသွားဘက်ဆိုင်ရာ ultrasonic scaler N2 dental scaler